လီမင်ဟိုနဲ့ တစ်ကားတည်းမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြမယ့် မင်းသား ဝူဒိုဟွမ်း - For her Myanmar
လီမင်ဟိုနဲ့ တစ်ကားတည်းမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြမယ့် မင်းသား ဝူဒိုဟွမ်း
ယောင်းကရော.. လီမင်ဟို ပရိသတ်လား? ဒိုဟွမ် ပရိသတ်လား?
မင်းသား လီမင်ဟိုနဲ့ goblin မင်းသမီး ကင်ဂိုအွန်း တို့ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ရိုက်တော့မယ်လို့ အတည်ပြုပေးပြီးတဲ့နောက် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ second lead (ဒုတိယ မင်းသား)က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ပရိသတ်တွေ သိချင်နေကြပါတယ်။ Main Lead (အဓိက ဇာတ်ဆောင်) နှစ်ယောက်စလုံးက ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ ကင်အွန်းဆွတ်ခ်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ အသားကျပြီးသား ဖြစ်ပေမဲ့ ဇာတ်ပို့မင်းသားနေရာမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့်သူကရော ဒီဇာတ်လမ်းကို နိုင်ပါ့မလား စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို “The King: The Eternal Monarch” လို့ နာမည်ပေးထားပြီး Multiverse တွေ ကြားမှာ အမျိုးစုံ ကြိုးခုန်ကြမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ မင်းသမီး ကင်ဂိုအွန်းက ဇာတ်ရုပ်နှစ်ခုနဲ့ သရုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်း ထုတ်လုပ်သူတွေအားလုံက အတည်ပြုပြီးသွားပါပြီ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို ကောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကာ အားလုံး စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ အပြိုင်မင်းသား လာပါပြီ။ သူကတော့ tempted (The Great Seducer) ထဲက မင်းသား ဝူဒိုဟွမ်ပါပဲ ယောင်းတို့ရေ… သူ့ရဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကလည်း နှစ်မျိုးပါပဲ။ မျက်မှောက်ခေတ် ကိုရီးယားမှာ နေထိုင်တဲ့ သာမန် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ထမ်း ဇာတ်ရုပ်အပြင် ကိုရီးယား အင်ပါယာမှာတော့ လီမင်ဟိုရဲ့ သက်တော်စောင့် ဂျိုယောင်း နေရာမှာ နေရမှာမို့ Second Lead နေရာက အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောကြတာပါ။
Related Article>>>မကြာမီ ဖန်သားပြင်ထက်မှာ ကြည့်ရှုခံစားရတော့မယ့် လီမင်ဟိုနဲ့ ကင်ဂိုအွန်းတို့ရဲ့ ဒရာမာသစ်
Second lead နေရာမှာ ဒိုဟွမ်ကို ထည့်လိုက်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေကတော့ လီမင်ဟိုအတွက် နည်းနည်းလေး စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ The Heirs မှာတုန်းက ခေါင်းဆောင်မင်းသားထက် ကင်ဝူဘင် ပရိသတ် ပိုများသွားတာမျိုးကို တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီမို့ ဒီတစ်ကားမှာရော ဒိုဟွမ်ပရိသတ်တွေ ပိုများသွားမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေကြတာပါ။ ဒီလို ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ထုံးစံအရလည်း ဒုတိယမင်းသားရဲ့ ဇာတ်ရုပ်က ပိုပြီး လှတယ်မဟုတ်လား…
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် “The King:The Eternal Monarch” က ဇာတ်ကောင် သုံးခုစလုံး မိတ်ဆက်ပေးသွားပြီးပြီမို့ စောင့်ကြည့်ရမှာက ယောင်းတို့ အက်ဒ်မင်တို့ အလုပ်ဖြစ်သွားပါပြီ.. အယ်လယ်.. 😀 ဒီ စီးရီးစ်သစ်ကို မကြာခင်အချိန် (၂၀၁၉ နှစ်ဝက်)မှာ စတင်ရိုက်ကူးတော့မှာ ဖြစ်ပြီး၂၀၂၀ အစပိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်သွားမယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။
ဘယ်လိုလဲ ရင်ခုန်နေပြီမလား ယောင်းတို့ရေ…
Reference: Hellokpop, Soompi
ယောငျးကရော.. လီမငျဟို ပရိသတျလား? ဒိုဟှမျ ပရိသတျလား?
မငျးသား လီမငျဟိုနဲ့ goblin မငျးသမီး ကငျဂိုအှနျး တို့ ဇာတျလမျးတှဲအသဈရိုကျတော့မယျလို့ အတညျပွုပေးပွီးတဲ့နောကျ ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာ second lead (ဒုတိယ မငျးသား)က ဘယျသူဖွဈမလဲ ဆိုတာ ပရိသတျတှေ သိခငျြနကွေပါတယျ။ Main Lead (အဓိက ဇာတျဆောငျ) နှဈယောကျစလုံးက ဇာတျညှနျးရေးဆရာ ကငျအှနျးဆှတျချရဲ့ ဇာတျလမျးတှမှော အသားကပြွီးသား ဖွဈပမေဲ့ ဇာတျပို့မငျးသားနရောမှာ သရုပျဆောငျမယျ့သူကရော ဒီဇာတျလမျးကို နိုငျပါ့မလား စဉျးစားစရာတှေ ဖွဈလာပါတယျ။
ဇာတျလမျးတှဲအသဈကို “The King: The Eternal Monarch” လို့ နာမညျပေးထားပွီး Multiverse တှေ ကွားမှာ အမြိုးစုံ ကွိုးခုနျကွမယျ့ ဇာတျကားတဈကားပါ။ မငျးသမီး ကငျဂိုအှနျးက ဇာတျရုပျနှဈခုနဲ့ သရုပျဆောငျသှားမယျဆိုတာကိုလညျး ထုတျလုပျသူတှအေားလုံက အတညျပွုပွီးသှားပါပွီ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးကို ကောကျပွီးသှားပွီဆိုတော့ကာ အားလုံး စိတျဝငျစားကွတဲ့ အပွိုငျမငျးသား လာပါပွီ။ သူကတော့ tempted (The Great Seducer) ထဲက မငျးသား ဝူဒိုဟှမျပါပဲ ယောငျးတို့ရေ… သူ့ရဲ့ ဇာတျရုပျကလညျး နှဈမြိုးပါပဲ။ မကျြမှောကျခတျေ ကိုရီးယားမှာ နထေိုငျတဲ့ သာမနျ ပွညျသူ့ဝနျဆောငျမှု ဝနျထမျး ဇာတျရုပျအပွငျ ကိုရီးယား အငျပါယာမှာတော့ လီမငျဟိုရဲ့ သကျတျောစောငျ့ ဂြိုယောငျး နရောမှာ နရေမှာမို့ Second Lead နရောက အရေးကွီးတယျလို့ ပွောကွတာပါ။
Related Article>>>မကွာမီ ဖနျသားပွငျထကျမှာ ကွညျ့ရှုခံစားရတော့မယျ့ လီမငျဟိုနဲ့ ကငျဂိုအှနျးတို့ရဲ့ ဒရာမာသဈ
Second lead နရောမှာ ဒိုဟှမျကို ထညျ့လိုကျတဲ့အတှကျ ပရိသတျတှကေတော့ လီမငျဟိုအတှကျ နညျးနညျးလေး စိုးရိမျနကွေပါတယျ။ The Heirs မှာတုနျးက ခေါငျးဆောငျမငျးသားထကျ ကငျဝူဘငျ ပရိသတျ ပိုမြားသှားတာမြိုးကို တှခေဲ့ရပွီးပွီမို့ ဒီတဈကားမှာရော ဒိုဟှမျပရိသတျတှေ ပိုမြားသှားမလားဆိုပွီး စိုးရိမျနကွေတာပါ။ ဒီလို ဇာတျကားတှရေဲ့ ထုံးစံအရလညျး ဒုတိယမငျးသားရဲ့ ဇာတျရုပျက ပိုပွီး လှတယျမဟုတျလား…
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ “The King:The Eternal Monarch” က ဇာတျကောငျ သုံးခုစလုံး မိတျဆကျပေးသှားပွီးပွီမို့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာက ယောငျးတို့ အကျဒျမငျတို့ အလုပျဖွဈသှားပါပွီ.. အယျလယျ.. 😀 ဒီ စီးရီးဈသဈကို မကွာခငျအခြိနျ (၂၀၁၉ နှဈဝကျ)မှာ စတငျရိုကျကူးတော့မှာ ဖွဈပွီး၂၀၂၀ အစပိုငျးမှာ ထုတျလှငျ့သှားမယျလို့ သတငျးရပါတယျ။
ဘယျလိုလဲ ရငျခုနျနပွေီမလား ယောငျးတို့ရေ…
Tags: Celenews, confirm, join, Kim Go Eun, Lee Min Ho, Woo Do Hwan
နောက်လထဲမှာ comeback လုပ်သွားဖို့ ရှိတဲ့ Park Bom
Ei Mon February 16, 2019
ပိတ်ရက်မှာဘယ်ပွဲနွှဲရမလဲဆိုပြီး ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ ယောင်းတို့အတွက်
Yin Sandi Ko February 6, 2019
Wynee Myanmar November 9, 2018